Haad loo xiray Boko Xaram-nimo oo la sii hayn doono - BBC News Somali
Haad loo xiray Boko Xaram-nimo oo la sii hayn doono
Bog 3 of 3
Posted at 7:07 20 May7:07 20 May
Ururka Al Shabaab oo Bakool ku laayay ciidammada Soomaaliya
Warrarka laga helayo gobolka Bakool ee Soomaaliya ayaa sheegaya in ugu yaraan saddex askari lagu dilay weerar kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday degmada Waajid xalay saqdii dhexe.
Dadka deegaanka ayaa BBC-da u sheegay in koox aad u hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab oo isticmaalaya gantaalada garabka laga rido iyo qoryaha darandooriga u dhaca ay weerrar ku qaadeen saldhig milatariga uu Soomaaliya ku leeyahay galbeedka Waajid halkaas oo in cabaara lagu dagaalamayay.
Gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamad Cabdi Tool ayaa isna BBC-da u sheegay in sedex askari oo ka tirsan ciidanka dawladda la dilay isla markaana hubkoodii horey loo sii qaatay.
"Xalay markii ay ahayd lix saac waxaa Waajid ka dhacay dagaal, nimankii nabad diidka ahaa ay soo weerareen dhufeyska dhinaca galbeed ka xiga magaalada, marka sida la ii sheegayo waxa weeye meeshaas illaa sedex askari oo ciidanka dawladda ah ayaa ku geeriyooday. Khasaaraha dhinacooda war uma hayo laakiin inta isoo gaartay intaas waaye" ayuu yiri gudoomiye Tool.
Weerarradii ay Al Shabaab ku qaadi jirtay saldhigyada ayaa yaraaday, balse waxay sii wadaan qaraxyada ay ka gaystaan Muqdisho.
Posted at 6:14 20 May6:14 20 May
Muxuu sameeyay maalqabeenka Madaw ee aadka loo hadal hayo?
Nin bilyan dheere ah oo maalgashaday teknoolajiyadda ayaa ka yaabiyay arday ku qalin jabinaysay Atlanta, Georgia, ka dib markii uu u sheegay in uu bixin doono dhammaan daymihii ardaynimada ee lagu lahaa.
Robert F Smith oo ka mid ah samefalayaasha Madaw ee Maraykanka ayaa khudbad ka jeedinayay Morehouse College, oo taariikh ahaan ay dhigtaan ragga madaw oo kali ah.
Ku dhawaad 400 oo arday ayaa ka faa’iidi doona, waxaana laga bixin doonaa tobannaan milyan oo doolar.
Ardaydan qalinjabinaysa sannadka 2019 iyo macallimiintoodii ayuu mucjiso la noqday warkaasi, sacab ayaana mar qura is qabsaday.
Smith oo 56 jir ah ayaa sannadkii 2000 aasaasay shirkadda gaarka loo leeyahay ee Vista Equity si uu u maalgashado shiradaha sameeya hanaanka ay kombiyuutarradu ku shaqeeyaan, hantidiisana waxay gaadhaysaa 5 bilyan oo doolar, sida uu tabiyay wargeyska dadka maalqabeenka ah ka faalooda ee Forbes.
“Aniga oo ku hadlaya qoyskanaga oo siddeed jiil ku sugnaa dalkan, waxaan shidaal yar ku shubaynaa baska aad saarantihiin,” ayuu yiri Smith oo ka hadlay xafladda qallin jabinta oo Axaddii dhacday.
“Kani waa dufcadaydii sannadka 2019. Qoyskayguna wuxuu bixinayaa dhammaan daytii waxbarashada ee ardayda lagu lahaa.”
Maalqabeenkan ayaa koleejka u tagay si uga gudoomiyo shahaado sharaf Dr nimo ah, intii uusan arrintan ardayda ku dhawaaqinna wuxuu koleejka ugu sii tabarucay 1.5 milyan oo doolar.
Ma cadda qiimaha rasmiga ah ee ay ku kici doonto tabarucaaddan u dambaysay ee uu ballanqaaday maadaama oo koleejku uusan wali shaacin kharashka guud ee lagu leeyahay ardayda tabarucaadda ka faa’iidaysa, balse waxaa lagu qiyaasay in ay ugu yaraan noqon doonto 10 milyan oo doolar, in ay aad uga badatana waa laga yaabaa.
Aaron Mitchom oo 22 jir ah ayaa ooyay markii uu maqlay warka sheegaya in aan looga baahnayn in uu bixiyo 200,000 ee doolar ee daynta ahyd ee lagu lahaa, taas oo uu waxbarashadiisa ku maalgaliyay, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee AP.
“Aad baan u yaabay, wadnahaygii ayuu isbadal ku yimid, dhammaantanana waan ooynay, arrintaas waxay ahayd caqabad i korsaarnayd oo la iga kor qaaday.”
David A Thomas oo madaxweyne ka ah koleejka ayaa yiri “Marka dayn lagugu leeyahay ee ay tahay in aad bixiso, sidii la hayste ayaad tahay” waxaa sidaas ka soo xigatay CNN.
“Dayntan laga bixiyay waxay xoriyad u siinaysaa in ay rumeeyaan riyooyinkii ay lahaayeen”.
Posted at 6:13 20 May6:13 20 May
Waa maalin Isniin ah oo ay taariikhdu tahay 20 bisha May sannadka 2019.